Masuuliyiinta xafiiska qurbo joogta DDSI oo casho-sharaf ugu sameeyay Nogob-Hotel Engineer Ahmed C/laahi axamuud. Oo Waayo Dhex-Heehaabayay Mawjadaha mala-awaalka UBBO. - Cakaara News
Masuuliyiinta xafiiska qurbo joogta DDSI oo casho-sharaf ugu sameeyay Nogob-Hotel Engineer Ahmed C/laahi axamuud. Oo Waayo Dhex-Heehaabayay Mawjadaha mala-awaalka UBBO.
Horaa loo Yidhi "Ishaadu waa kula Da',Dhegtaaduna kaa Da'wayn",taasoo dulucdeedu tahay ishaadu waa kula Cimri oo intaad jirto uun bay jire,balse dhegtaadu way kaa da'wayn tahay oo taariikho hore,isbedelada caalamka iyo Xaqiiqda waqica dhabta ah ee Koomka ka jira ayaa daran-doori ugu soo dhacaya Qofka Caqli-saliimka ah. Sidaan wada ogsoonahay xukuumada deegaanka haatan ka arimisa ayaa waxay sanaddihii ugu danbeeyay dadaal dheer iyo Rucle u gashay sidii ay deegaanka loogu soo dabaali lahaa Nabadgalyo waarta oo u horseeda Bushada Kobac-dhaqaale,Maamul-Suuban oo saxar-tiran iyo Horumar ay kula jaanqaadaan wadamada Horumaray.
Sidoo kale Xukuumada maanta ayaa mudadii yarayd ee ay jirtay u miidaan-dayday sidii Dhamaanba Aragtida Shacabweynaha ka soo jeeda DDSI meel kasta oo ay ku nool-yihiinba ugu midayn lahayd Wadajir uga qaybqaadashada Arimaha Siyaasad,Horumar,N/galyo,Maamula-saxartiran iyadoona Fagaarayaal wadatshi uga Furtay Qaybaha Bulshada Dalka iyo 5ta Qaaradoodba socdaal Dheerna Guure ugu gashay.iyadoona ay xukuumada maanta jirta ee uu Hor muudka u yahay Madaxwayne CMC ay ku guulaysatay in Mudo gaaban ay si xawli ah ugaga midhodhaliso Soo afjarida UBBO Dal iyo Dibadba,islamarkaana Midayso Aragtida iyo Xooga Shacabweynaha kuna jihayso Tubta Nabadda iyo Horumarka.
Waxaa Hubaala in ay Dhamanba dadkii Ku hafaday Beryo Mawjadaha beenta ah ee UBBO ay hada xaqiiqdii iyo ka qaybqaadashada N/galyada iyo Horumarka u heensaysteen iyadoona bilihii ugu danbeeyay ay si talntaali ah ugu soo qulqulayaan DDSI Dhamaanba Hadhaagii Aaminsanaa UBBO ee Qurbaha,kuwaasoo Dheehday Xaqiiqda Dhabta ah iyo Horumarka Baaxada wayn ee ka taabogalay DDSI Cadceed soo baxday Sacabo lagu qarin waa.
Gundhiga iyo Dulucda Qoraalkanayaa ku sar go'an in dhawaan uu ku soo biiray Tubta N/galyadaiyo Horumarka Engineer C/laahi maxamuud oo Xilal uga hayay UBBO Wadanka Jarmalka kadib markii ay Cad-ceedu hortiisa isa soo Qotamisay Riyadii iyo Dhalaan habaabistiina Is Nuugtay. Injineerka ayaa si wayn loogu soo dhaweeyay Jigjiga,islamarkaana uu Xafiiska Qurboogta masuuliyiinta ugu saraysaa ay xalay Munaasabad Casho-sharaf ah Muujinaysa Tilmaanta walaalaha Dadkaaga Dhinac ka raac oo ha hagran Doorkaaga.
Maareeyaha wakaalada Qurbajoogta Cabdi Macalin,Kuxigeenka Qurbajoogta C/fataax siciid iyo Wakiilka Xafiiska AA Bashiir ayaa ku sugnaa Casho sharaftan uga xogwaramay wadciga Dhabta ah iyo Sidii Liyuupolice ay xididada ugu siibeen UBBO.
Engineerka oo casha sharafta ka dib u waramayay warihaya shacabkada waraka ee cakaaraNews ayaa waxa uu siwayn ugu waramay waxyaabaha u sabab ahaa in uu qaato tubta nabadgalyada, horumarka iyo Maamulka-saxartiran maadaama uu uu xilal kala duwan ka soo qabtay ururkii dabar go'ay ee la odhan jiray UBBO isaga oo sheegay in ay ugu waynayd xidhiidhka wanaagsan iyo wacyigalinta ay xukuumadu la yeelatay qurba joogta u dhalatay deegaanka iyo dhinaca media isgaadhsiinta oo ay ugu horayso CakaaraNews iyo tvga ESTV oo siwayn noo tusay ayuu yidhi engineerku xaqiiqda ka jirta deegaanka.
Sidoo kale waxa uu ka waramay engineerku dareenkiisa ku aadan arigtada markii uu cagaha soo dhigay garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga waxa uu sheegay in ay la noqotay wax amakaag ah garoonka baaxadaa iyo quruxdaasi leh in uu ku yaalo xarunta deegaanka ee jijiga waxa kale oo aan siwayn ula fajacay ayuu yidhi enginerku markaan soo galay xarunta Jigjiga oo ay indhahayga illo qaysay markaan arkay daaraha dhaa-dher laamiyada waa-wayn iyo bilicda guud ee ka muuqata magaalada jijiga.
Waxa kale oo uu sheegay enginerku wax aqoontiisa iyo maalkiisaba uga faa-iidaydona deegaanka uu u dhashay.
Dhankiisa waxaa isagunka ka hadlay munasabadaasi casha sharafta ah wasiirka qurba joogta DDSI mudane c/bari macalin maxamed oo sheegay in ay xukuumada markasta xukuumada DDSI diyaar u tahay soo dhawaynta qurba joogta u dhalatay deegaanka kuwaasi oo wakhtiyaddii hore ay xukuumadihii hore la yeelan islamarkaana ayna qurba joogta fahansiin xaqiiqda ka jirta deegaanka. balse ayuu wasiirkju markii ay xukuumada imika ka arimisa deegaanku xidhiidh dhinacyo badan taabanaya la yeelatay dhamaanba qurba joogta u dhalatay deegaanka waxaa marba marka ka danbeeya kor u sii kacaya ayuu yidhi tirada qurba joogta ah ee u dhashay deegaanka oo siwayn ugu soo qul qulaya deegaankooda kuwaasi oo ka hirgalinaya deegaanka maalgashiyo kala duwan.